म्यादी पुलिसले ५५ दिनमा कति कमाउँछन् ? - Dainik Nepal
म्यादी पुलिसले ५५ दिनमा कति कमाउँछन् ?
दैनिक नेपाल २०७४ वैशाख ८ गते ६:२९
काठमाडौं, ८ वैशाख । सरकारले निर्वाचनका लागि खटिने म्यादी प्रहरीको सेवा सुविधा निर्धारण गरेको छ ।
विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णय अनुसार म्यादी प्रहरीले ५५ दिनको तलब वापत ५१ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् । उनीहरुले पोशाक भत्ताको रुपमा थप ७ हजार १ सय रुपैयाँ पाउँनेछन् । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।